Xusuusta walaal aan xiskayga ka tirmayn inta aan xayga ahay
You are here: Home Home Xusuusta walaal aan xiskayga ka tirmayn inta aan xayga ahay
Haa…..Hurdo dheer in aan ka toosay baa la moodaa…..Haddana waan soo jeeday…Xusuusta aan tirmayn ayaa keentay xadantada xubnahayga nugul xaradhaamisay.
Jabuuti oo aan Caneb joogin
(Xusuusta walaal aan xiskayga ka tirmayn inta aan xayga ahay)
“Walaalo is-jecel wed kala qaadyoo,
Is-waaye amba waaxyahaygii,”
Suudi Xaaji Aadan Cilmi
Hibeyn Waxaan u hibeynayaa dhammaan qoyskayaga, gaar ahaanna aabbahay, hooyaday iyo hablahayagii Caasha-naado iyo Ruqiya-caneb.
Dhalashadii Caneb iyo dhismihii Qoyska............. 8
Booqashadaydii Meygaagle............................, 11
Xagaa-bixii iyo xanuunkii Caneb....................... 14
Cabdi Muxumed Diiriye (Bon Famille)................ 16
Booqashooyinkii SNM-ta.................................... 23
Sakaraadkii Caneb........................................ 24
Jaamac Caabbi Cawad..................................... 33
Imaam Yaxye Xaaji Ibraahin Warsame............... 33
Aabbahay Aw Yuusuf Ducaale Caynaan............ 38
Hooyaday Xaajiya Cibaado Xaaji Abokor Axmed Diiriye 41
Caneb aan u soo dego.................................. 43
Aaskii iyo baroor-diiqdii Caneb......................... 44
Gogoshii iyo tacsidii....................................... 45
Xaajiya Habboon Cabdi Muxumed:................... 50
Damaq iyo dareen-curin................................ 50
Gebegebada sheekada:................................. 58
Miyaan hadlayay…..Miyaan hugmayay…..Miyaan hadrayay…..Mise waan hadaaqayayba…..Mooyi…..Hadal iyo hawraari se iguma yarayn…..Hiida…..Haada…..iyo hidiidiqa oohinta hoortay miyan hadhsan waayay…..Hammiga…..Hilowga…..Miyaan la hiinraagay……Halaanhal naf mooday…..Miyaan hangallaystay…..Miyaan halladaadka…..Hu’gii ka dhaqaaqay…..Hilmaanka dartiina…..Maxaa hal I seegay…..Hagaag-u-dhaqaaqid…..Sow maan hinqan waayin…..Ma hiishan hangoolka…..Markuu socod heermay…..Miisaankii hallaabay…..Miyaan huri-waaga…..Haleelba ka quustay…..Gandoodka hillaabtay…..Baroorta haweenka…..Miyay hadhay yeedhay…..Ma hoognay la raacshay…..Miyaan hengel maanta…..Darteed Caneb haabtay.
Haa…..Halbowlaha iyo adhaxda sheekaduba waa Caneb Yuusuf Ducaale. Haa…..iyada ayaa sheekadan gaaban dhex-roor iyo dhex-taalba u ah. Bal se waa qormo qormadeed. Waa qalin qalinkii. Waa qowlka qowlkii. Qacda yeedhay waa qayladeedii. Waa qaddarin iyo qiimayn aan ku xurmeynayo mudankii qoyskayaga oo ay ugu horreyso Caneb Yuusuf Ducaale oo 14kii Diisambar 2010kii ku dhimatay magaalada Jabuuti. Waa qaddarin iyo qiimayn aan ku xurmeynayo aaabbahay iyo hooyaday. Waa qaddarin iyo qiimayn aan ku maamuusayo walaashay Caasho-naado. Waa xus iyo xusuus aan u samaynayo adeerraday Nuux iyo Muxumed. Waa qormo aan ku muunaynayo seeddiyaashay Cabdi Muxumed Diiriye, Jaamac Caabbi Cawad iyo Yaxye Xaaji Ibraahin.
Waxa ay ahayd maalin Isniineed oo ay bishii Maarj ahayd 21, sannadkan 2011ka. Goor ay saacaddu ku beegnayd ilaa 4.30kii galabnimo ayaan dayuurad ay leedahay Jubba ‘Airlines’ ka soo raacay gegeda caalamiga ah ee Cigaal ee magaalada Hargeysa. Maalin daal badnayd ayay ahayd oo in badan aanu sugaynay dayuuradda oo markii danbe ee ay soo fadhiisatayna in badan oo kale aanu sii sugaynay. Waxba ma ay soo socon ee markiiba waxa ay na keentay gegeida caalamiga ah ee dayuuradaha ee Jabuuti. Kuma aan raagin madaarka ee markiiba inta aan shandaddaydii qaatay ayaan tagsi I sugayay oo aan la ballansanaa raacay. Waa Cabdillaahi tagsiiluhu oo beryahn danbe oo dhanba aan raaco mar kasta oo aan Jabuuti tagaba.
Waa nin wanaagsan oo war-galeen ah isla markaana magaalada taako-taako ugu jira. Malahayga,carruurnimadiisii ayuu magaalda ku soo koray. Mar mar ayaad is-odhanaysaa ma Cabdilqaadir Jiilaani baa. Waa nin farxaan ah oo aan tilifoonka inta badan dhegaha ka dhigin wax yar se oo kooban gacanta ka adeegsada. Malahayga waa loo qariyaaye, Cabdillaahi Mashaakil ayay dadku ugu yeedhaan, anigu se intaa aan aqaannay Cabdillaahi uma dhaafo. Waa wax sheeko badan. Inta badan marka aad u yeedho wuxu kuugu soo jawaabaa: “Waanigaa soo dhaqaaqay iyo in yar ayaan kuu soo jiraa,” ayuu ku soo odhanayaa mar marka uu tilifoonkaaga khaatiyaan ka joogsado. Bal se in uu hore kuu soo gaadhaa waa ay adag tahay. Ma waayo wax aan kaa cadhaysiin oo uu kugu maaweeliyo. In aanu soo dhakhsanayn inta badan waxaad ku garataa marka aad la socoto ee uu dadka kale u jawaabayo. Waa nin dadka aad u yaqaanna oo macmiil badan. Ma shaqaale rag iyo dumarba leh oo sahqo tegaya ama rawaxayaa….ma carruur dugsiyo la geynayo ama laga soo qaadayaa…ma qolo barje tegaysa oo Cabdi Muuse ku jiraa. Inta badan waa uu qoslayaa, gelinnada danbe iyo habeennadiina jaad ayuu afka ku hayaa. Anigu markii aan bartay, marka aan u baahanahay cabbaar ka hor ayaan u yeedhaa si uu u soo socdo, u soo dhawaado, marka danbena ii yidhaahdo waanigaa soo galay. Ceebtii ma aha ee waa caadadii. Cabdillaahi waa mashruuc sidiisa ah. Ciddii aad u baahan tahay si fudud ayuu inta badan u soo dhuftaa oo tilifoonka kama baadho. Waxa intaa u dheer isaga oo hadba ciddii aad ka dalbato kaa siin kara inta badan macluumaad aad kaga go’aan qaadan karto ama aad ra’yiba kaga yeelan karto. Qaar aanad weydiin oo dariiqa maraya ayuu u hollanayaa in uu waxoogaa raad-raac ah ka bixiyo. Malaha in maah-maahaha lagu daro ayay ahayd: “Reer magaal tanaaday iyo tagsiile soo taagnaaba sida ay wax u og yihiin wax uma sheegaan.”
Xagga macaamilka iska Hargeysaawi aan badhax lahayn ayuu ahaa oo inta badan kuma aanu xisaabtami jirin halka uu iga soo qaaday iyo halka uu I geeyay, amaba inta saacadood ee aan la socday. Si kale haddii aan u idhaahdo kuma aanaan xisaabtami jirin inta uu ii taagnaa ama I sugayayba. Shul iyo shul ayuu xaalkayagu ahaa oo marna isaga ayaa bursanayay, marna aniga ayaa bursanayay. Bal se waxay ahayd xisaabtan aanu ku wada qanacsan nahay oo aannaan ku murmin ama lacag kaga wada hadal. Anna waan qabay dareenka inta uu I siday ama aan tagsigaba saarnaa, isaguna hayntayda iyo waayhayga si fiican ayuu uga war hayay. Marna islama aanu seegin ee waanu isla heli jirnay. Isaga oo aan I qaadin kama dhoofin madaarka Jabuuti kamana soo deign. Si wanaagsan ayaanu isu maca-salaamayn jirnay.
Inta aanan hore u bixin, aan wax badnayn ku hakado Maxamed Cali Ammaan, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo e’. Wuxu ka mid ahaa dadka ay igu adkayd in aan Jabuuti suureeyo haddii ay ka maqan yihiin. Saaxiib kal iyo laabba furan ayuu ahaa. Run ahaantii xidhiidhkii aanu lahayn saaxiibtinnimo waa uu ka badnaa. Garan maayo intii uu noolaa aniga oo Jabuuti jooga oo meel kale oo aan gurigiisa ahayn ka qadeeyay. Dhif iyo nadir ayay ahayd. Intaas oo keliya ma ahayn e’ meel aanu jooginna ma fadhiisan. Inta uu shaqaynayo mooyaan e’ inta kalena waanu wada soconnay. Markii la igu yidhi wuu dhintay ee aan tacsiyadeeyay ayaan is-odhan jiray: “Bal haddaba waa taa Jabuuti e’, yaa ku dhacaya Maxamed Cali Ammaan la’aantii?” Isagana intaa aan uga dhigo xusuus iyo xurmo aan guurinba, marka aan Jabuuti tagana ima seegto in aan gurigii iyo carruurtii soo eegaa.
Siciid Maxamed Xasan ayaa isaguna beryaha qaar sidaas oo kale ahaa. Waa 81kii ilaa 82kii, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo labadoodaba e’. Mefrish-wadaag ayaanu ku ahayn mefrishkii ‘Aakhiro’ la odhan jiray ee Xaafadda 5aad.
Nin Cali-roodhi la odhan jiray oo SNM ka mid ahaa oo dhintay, Berberana lagu aasay ayaa odhan jiray: “Miyaad maqasheen maah-maahaha aan sameeyay.” Mid ka mid ah ayaa ahayd: “Asqo magaalo, saaxiibbo adag ka lahow.”
Halkii madaarka ayuu Cabdillaahi iga dhuftay. Shir ay ku ballansanaayeen Beelaha Gabooye ee Soomaaliyeed ayaan ka qayb-gelayay. Waxa ergooyinka qaybtii aan ka midka ahaa la dejiyay Hudheelka Imperial ee Jabuuti oo aan markii iigu horreysay ku degay. Cabdillaahi waxa aan ka codsaday in uu I sii mariyo gurigii ay ka dhimatay walaashay Caneb Yuusuf Ducaale oo aan ilaa dhowr iyo lixdankii ku degi jiray. Gurigayga labaad ayuu ii ahaa, haddii aanu mararka qaarkood ka koowaadba ii ahayn. Gurigii ayuu is-hor taagay. Gaadhigii ayaan ka degay. Waan ogaa Hodan Cabdi Muxumed oo aan abti u ahaa in ay guriga keligeed ku hadhay, bal se iyada qudheeda ayaa Hindiya shaqo iyo tabobarba ugu maqnayd. Inantii guriga ka shaqaynaysay ee ay Hodan kaga tagtay oo Canab la yidhaahdo ayaan bariidiyay oo cabbaar la joogay. Hilow iyo xusuusba maskaxdaydu xilliyo tegay ayay faallada ugu maqnayd.
Cabdi Muxumed Diiriye
Cabbar markii aanu Caneb oo guriga mas’uul ka ahayd la joogay ayaan tagsigii Cabdillaahi dib ugu noqday. Waxaanu u ambo-baxnay Hudheelka Imperial ee ka sokeeya Sheraton oo ciddii na marti-qaadday meel nooga qabatay ama aanu ku degaynayba. Waxaanu ka qayb-gelaynay Shir ballaadhan oo ay isugu imanayeen Beelaha Gabooye oo meelo kala geddisan ka imanayay. Si wanaagsan ayaa la ii soo dhaweeyay qol weyn oo qabowna waa la I siiyay. Waxaan u malaynayaa in uu ahaa Lambar 145. Sariirtu laba-qaad ayay ahayd si la yaab leh u goglan. Qolku nefis iyo masquushuba. Bahal qaboojiye ah oo meeshiiba baraf ka dhigayna waa uu ku xidhnaa. Marka aan xejin waayo waan aan iska xidhayayba.
Laba arrimood ayaa xusuus gaar ah igu lahaa intii shirku socday. Maalin ayaan e-mailkayga furay. Wiil aan Cabdillaahi Cabdi Shube sawirkiisa weydiistay ayaa ii soo jawaabay. Baadi-soocda e-mailkiisa ayaa ahayd midgaanyare@......... Wallaahi hoosta ayaan uga duceeyay. Maalin kalena nin ayaa nagu qaaday baabuur Pajero ah. Aniga iyo Aamina oo Guddida Xuquuqda Aadamaha Somaliland madax u ah ayaanu ahayn. Xagga danbe ayaanu fadhiisannay oo in cid kale na raacayso ayaanu moodaynay. Labadayadii ayuu nala dhaqaaqay. Markii aanu hudheelkii ka baxnay ayuu dib noo soo jalleecay isaga oo aniga ila hadlayay. Ku-ye: “Ma reer Kiiniya ayaad tahay?” Markaas ayaan ku idhi: “Maya ee reer Somaliland.” Wuxu igu celiyay: “Ma Isaaq ayaad tihiin?” “Haa,” ayaan ugu jawaabay. Isagii ayaan ku noqday: “Adiguna?” Markaas ayuu iigu jawaabay: “Muuse Dheriyo oo reer Tallaabo-cadde ah.” “Lillaahi darrak,” ayaan ku idhi. Bal maxay ku caayi haddii uu ab, isir iyo laan-dheeriba sheegtay. Bal adba!
Inta aan shandaddii dhigtay ayaan gurigii walaashay Caneb Yuusuf Ducaale ka dhimatay dib ugu noqday aniga oo macawis xidhan. Rashiid iyo niman la fadhiyay ayaan iskala fadhiistay. Goor danbe ayaan ka imid oo aan hudheelkii Imperial u soo hoyday. Berendahaa aan galabtaa fadhiyay ayaanu Caneb Yuusuf Ducaale ku wada sheekaysan jirnay.
Mararka aanu berendahaa ku sheekaysanayno marna gambadh ayay ku fadhiisan jirtay, marna gogol khafiif ah ayay agtayda dhigan jirtay oo waa ay yar jiifsan jirtay annaga oo sheekada gawda hayna. Sawirkani waa kii ugu danbeeyay ee Caneb laga qaaday, shan maalmood ka dib markii ay Hargeysa nagaga soo noqotay. Ganbadhkeedii ayay ku fadhidaa, aniguna mar kasta oo aan u imaaddo berendaha ka danbeeyay ayaan fadhiisan jiray aniga oo albaabkaa birta ah dhabarka saari jiray.
Dhalashadii Caneb iyo dhismihii Qoyska